Twitterrific inowanikwa pahafu yemutengo wenguva yakatarwa | Ndinobva mac
Krisimasi haisi nguva chete yekuti tinogamuchira zvipo, asi isu tinomanikidzwawo kutenga shamwari neshamwari. Asi mukuwedzera, zvinowanzoitika nguva yakanakisa yegore kutenga mamwe maapplication atange tichiteedzera mukati megore rose.
Kunge gore rega rega, vakomana vepaAppSanta vakanyora mafomu akasiyana siyana, mafomu ekuti kusvika munaZvita 26 anotevera, tichakwanisa kurodha mahara kwenguva yakati rebei. Twitterrific ndechimwe chazvo, iko kunyorera kune mutengo unowanzoitika makumi maviri nemaviri euros, asi panguva ino, tinogona kutenga gumi nemaviri euros.
Vakomana paIcon Factor, vatora iko kunyorera kweMac kwemwedzi mishoma, mushure mekutsvaga mari paKickstarter kukwanisa kuita chirongwa pasina kubatwa, tisingazive kuti chii chingave kugamuchirwa kwacho pakati pevashandisi. Ivo nekukurumidza vakakwanisa kuwana mari inodiwa kuti vaite chirongwa ichi, icho chakaratidza kuti vashandisi veiyo Twitterrific iOS application vaive nechido chekufarira Twitter desktop application. Iko kunyorera kwakasvika pamusika ingangoita mwedzi mitatu yapfuura nemutengo we3, kana maeuro, chimwe chinhu chakanyanyisa kana tikachienzanisa nemakwikwi akaita seTweetbot.
Iyo desktop vhezheni ye Twitterrific inotipa isu chaizvo iwo mamwe mabasa atinogona kuwana parizvino muiyo iOS vhezheni, kunyanya idzo dzinoenderana nesarudzo dzekugadzirisa, zvichitibvumidza kuti tishandure font yetsamba uye nerweseri ruvara. Kubva kuvhurwa kwayo, vanogadzira vari kusunungura angangoita mazuva ese gumi neshanu, inogadziridza achiwedzera mabasa matsva mukuwedzera kune kusanganisira kuvandudza mukushanda kweiyo imwe chete.
Kana iwe uri iPhone kana iPad mushandisi, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo iOS vhezheni inowanikwawo kune yako hafu mutengo kurodha pasi, saka iri zvakare mukana wakanaka kusevha hafu yezvazvinodhura panguva ino yeKisimusi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Twitterrific inowanikwa pahafu yemutengo wenguva yakatarwa